Somary miadana ve ny Wi-Fi? Andramo apetraka DNS manual | Vaovao IPhone
Nisy namako nilaza izany tamiko Ny fifandraisana Wi-Fi iPad dia tsy haingana araka ny tokony ho izy, ary mety hisy vahaolana tsotra kokoa noho izay eritreretinay izany.
Ny tetika dia ny fanovana ny DNS izay omen'ny router default antsika ho an'ireo manana fahaiza-manao fantatra tsara, anisan'izany no hisafidianako ny iray amin'ireto:
Google DNS: 8.8.8.8 sy 8.8.4.4
OpenDNS: 208.67.222.222 ary 208.67.220.220
Raha hanova ny DNS dia tsotra ianao: Mila manokatra safidy ianao, mankanesa any amin'ireo safidy mandroso amin'ny Wi-Fi izay ampifandraisintsika ary kitiho ny faritra DNS.
Loharano | OSXdaily
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Somary miadana ve ny Wi-Fi? Andramo ny mametraka DNS manual
Ivan Sanz dia hoy izy:
Izaho manokana dia tsy mahita an'ity safidy ity amin'ny iPad 1 ao amin'ny kinova 4.2.1, miditra ny fifandraisana Wifi aho amin'ny alàlan'ny fanindriana ny zana-tsipìka manga kely ary miseho ny safidy DNS, saingy ireto 2 izay miseho amin'ny sary ... inona aho Diso ve aho?
Valiny tamin'i Ivan Sanz
JML dia hoy izy:
Mila manova ny DNS azonao amin'ny iPad ianao ho an'ireo an'ny famoahana.
Valiny amin'i JML
Dder dia hoy izy:
Tokony hanao ny fanovana amin'ny router ianao fa tsy amin'ny ipad
Valiny tamin'i Dder
Kepalope87 dia hoy izy:
Ireo tonga dia hamerina ahy ...
Mamaly an'i Kepalope87
Maxmarcos dia hoy izy:
Tena tsara, nataoko tsara ny fanovana ny fikirakirana ny router sy ny fivezivezena (amin'ny fitaovana rehetra mifandraika)
Valiny tamin'i Maxmarcos
Ianao no lehilahy nampiantrano, misaotra!
José Adrián Mendoza García dia hoy izy:
Nametraka openDNS amin'ny iPad 2 Mini aho ary niasa hatreto, misaotra betsaka anao noho ny tendrony.
Valiny tamin'i José Adrián Mendoza García
Inona ary ary ho an'iza ny fitaovana TinyCFW